Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ze-MGM zamangalelwa ngenxa yeefizi zokuchithela iiholide
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Resorts » Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ze-MGM zamangalelwa ngenxa yeefizi zokuchithela iiholide
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-MGM Resorts International ityholwa ngabaHambeli abaManyeneyo ngokuhlawulisa abathengi imali yokukhohlisa ngokuchasene noMthetho weNkqubo yoKhuselo lwaBathengi weSithili seColumbia (CPPA).
Uninzi lweepropathi ze-MGM zibanga ukuba umrhumo weholide ubhatalela izinto ezahlukeneyo zoncedo kodwa ngexesha lobhubhane we-COVID-19.
Umthetho uthi intlawulo yokuchithela indawo kukwaphula umthetho wokukhusela abathengi weSithili saseColumbia.
Abahambi baseUnited bathi amaxabiso okuthengisa ngaphandle kokubonisa imirhumo enyanzelekileyo yintengiso engeyonyani.
Iziphumo ezinokubakho zomthetho zibalulekile njengoko yonke ipropathi ye-MGM e-United States ihlawulisa imirhumo yeholide.
Uninzi lweepropathi ze-MGM zibanga ukuba umrhumo weholide ubhatala izinto ezahlukeneyo kodwa ngexesha lobhubhane we-COVID-19, uninzi lwezi zinto zancitshiswa okanye zacinywa. Ngaphandle koku, i-MGM zange yehlise amaxabiso eefizi zabo. Oku kubonisa ukuba akukho lungelelwaniso phakathi kwezinto eziluncedo kunye neefizi zokuchithela iiholide. Imirhumo yeholide yenza ihotele ixoke malunga nexabiso legumbi elibhengeziweyo.
bonke Iipropathi zeMGM eUnited States bahlawulisa iifizi zokungcebeleka nokuba bakwiZiko leLizwe leLizwe, eLas Vegas, okanye eDetroit. Akukho lungelelwaniso nehotele ikwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye nokuhlawuliswa kwemirhumo yeholide.
Kudala abahambi beUnited bethetha oko iihotele ezibiza iifizi zenkohliso ukwenza njalo kukwaphula umthetho. Isikhalazo esifakwe ngabakhenkethi United sijongana nenkohliso ngokubanzi yemirhumo yeeholide ukongeza kokungekho mthethweni kwemirhumo yeeholide ehlawuliswa kumagumbi "eceded". Isimangalo sijongana nokuba bonke abarhafi baseDC bachatshazelwa zezi ntlawulo zingekho mthethweni xa amagosa karhulumente weSithili ehlala ehotele eMGM ukuze asebenze.
Abahambi eManyeneyo bafuna ukuba kuphele kwangoko ukuhlawuliswa kweefizi zeehotele kubemi besithili kuyo nayiphi na ipropathi ye-MGM e-United States. Oku kungabandakanya izohlwayo zemali ezihlawulwe nabaphi na abahlali besiThili ababize iifizi ezingekho mthethweni kwiihotele, ukubuya komrhafi werhafu imali echithwe kwimirhumo yeendawo zokulala, kunye nokupheliswa kwentengiso ye-MGM kumagumbi ancomekayo kubahlali beSithili ukuba bahlawulisiwe comped ”igumbi.
U-Lauren Wolfe, Igqwetha labakhenkethi eUnited States uthi: “Imirhumo yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide kukwaphula umthetho weDC okhusela abathengi. Lixesha lokuba kuphele isenzo esenyanyekayo semirhumo yeeholide engekho mthethweni ngumzi wehotele. Yonke imirhumo yehotele enyanzelekileyo kufuneka ibandakanywe kwixabiso elipapashiweyo ukuze libe semthethweni. Inkohliso kaMGM yokuhlawula iihotele kufuneka iphele. ”
Abahambi abaManyeneyo yirhafu engenzi nzuzo-ngaphandle kwama-501 (c) (3) umbutho ojolise ekuchongeni nasekukhuthazeni iindlela zokuphucula kunye nokuphucula uhambo lwabathengi kuzo zonke iindlela zokuhamba.